Kutengeswa Kwepasi Pasi Rose - Free International Delivery - WoopShop
Tenga Nekutenda | Cash Inobhadharwa Kubhadhara Makomborero
zvoseBaby & KidsGadgets & AccessoriesHealth & BeautyKumba & KumbaMatches FashionFashion MenSportswearSuper DealsUnder $ 9.99Mifananidzo yevakadzi
US Dollar Euro Canadian Dollar Australian Dollar British Pound Indian Rupee Ukraine Hryvnia Turkish Lira Japanese Yen Swiss Franc Danish Krone Russian Ruble Bulgarian Lev Polish Zloty Serbian Dinar Belarusian Ruble Macedonian Denar Albanian naAmareki Georgian Lari Hungarian Forint Croatian Kuna Iceland Krona Azerbaijan New Manat Kazakhstan Tenge Moldovan Leu Real Brazilian Mexican Peso Argentine Peso Peruvian Nuevo Sol South-Korean Won South African Rand Malaysian Ringgit Indonesian Rupiah Philippine Peso East Carribean Dollar Emirates Dirham Saudi Riyal Euro Rial
Cart / ZAR0.00 0
Kutumira & Kutumira
WoopShop.com inodada nekupa maFree epasire kutumira pasi rese masevhisi ayo anoshanda munyika dzinopfuura mazana maviri. Hapana chinoreva zvakawanda kwatiri kupfuura kuunza vatengi vedu kukosha kukuru uye sevhisi. Ticharamba tichikura kuti tizadzikise zvinodiwa nevatengi vedu vese, tichiendesa sevhisi kupfuura zvese zvinotarisirwa pese pano pasi.
Mapakeji anobva kuimba yedu yekuchengetera kuChina anozoendeswa nePacket kana EMS zvichienderana nehuremu uye saizi yechigadzirwa. Mapakeji anotumirwa kubva kuimba yedu yekuchengetera eUS inotumirwa kuburikidza neUSPS. Nekudaro, nekuda kwezvikonzero zvezvinhu, zvimwe zvinhu zvichazotumirwa mumapaketi akasiyana.
WoopShop inofara kupa vatengi vedu nekutumira pachena kune dzimwe nyika 200 + pasi rose. Zvisinei, kune dzimwe nzvimbo dzatisingagoni kutumira kune. Kana iwe ukaitika kuti uri mune imwe yenyika idzodzo tichakutarisa iwe.
Hatina kodzero pamusoro pemitero yemitero, Hatisi mhaka yemari chero ipi zvayo kana zvinhu zvatitumirwa sezvo iri mitemo uye mitemo yekutumira inowanzosiyana kubva kunyika nemunyika. Nokutenga zvigadzirwa zvedu, unobvuma kuti imwe kana kuti mamwe mapeji angatumirwa kwauri uye inogona kuwana mari yemitambo pavanosvika kunyika yenyu.
Nzira dzekutumira uye Nguva Dzokutumira
Yese mirairo inotumirwa mukati memaawa makumi maviri nemasere ebhizinesi. Kununura kunotora mazuva manomwe ebhizinesi uye mune zvisingawanzoitika mazuva makumi matatu ebhizinesi.
nzvimbo Inofungidzirwa Kutumira Nguva
nyika dzakabatana 7-20 bhizimisi mazuva
Canada, Europe 10-20 bhizimisi mazuva
Australia, New Zealand 10-30 bhizimisi mazuva
Mexico, Central America, South America 15-30 bhizimisi mazuva
Iwe unozogamuchira email kamwechete ako ekuraira ngarava ayo ane yako yekutarisa ruzivo, asi dzimwe nguva nekuda kwemahara ekutumira tracking hakuwanikwi. Dzimwe nguva kuongororwa maIDs kunotora 2-5 mazuva ebhizinesi ekutsvaga ruzivo kuongororesa pane system. Kana iwe uchida rumwe ruzivo, tapota usazeze kutibata nesu uye tichaita zvatinogona kuti tikubatsire kubuda.
Pamuviri Seti Belt Adjuster 16.87€ - 37.96€
Vemhando yemberi Stainless Zimbi Quartz Watch For Men
32.05€ - 37.11€
Yasina Stain Year Year Maketi Makosi emadzimai
Best Best Today
Huru Dzakaita Butterfly Sleeve Mushonga Wakafukidzwa Kuputika Ruffle Mini Dress
17.96€ - 24.39€
Kushanda O-mutsi Sleeveless Hollow Out Lace Blouse 22.26€ 16.69€
Bhuku Risina Kukwana Sleeve Yakasimba Yakashata Iko Mheni Bomber Jacket
Premium Waterproof IP65 Laser Spotlight Projector NeMutevedzeri Remote
Cool Windproof isina chakanaka USB Inotakura Chiedza Chiedza Chengetedza
14.36€ - 16.81€
Eyes Makeup Ratidza Dhiviri Musoro Wemaziso Pemiti Cream & Eyebrow Brush & Eyebrow Tweezers & Eyebrow Trimmer
6.72€ - 10.10€
Top Rated Rated Today
300ml Vanhu Vakuru nevana Neti Pot Standard Standard Nasal Wash & Allergies Relief Rinisa
Breathable Men Casual Shoes Korean High-Top Lace-up
High Waist Streamer Digital Printing Skinny Women Black Leggings
Nhamo! Iwe uri paWoopShop.com iyo inotungamira zvekutengesa uye yekutsvaga webhusaiti yepaIndaneti nekupa vatengi vane mikana uye yakanakisisa kusarudzwa kwemutengo, mutengo wokukwikwidzana, mukuru wekutengesa kushandiswa, uye unyanzvi uye wakatsaurirwa mutauro wemitauro yemitauro yakawanda, uye ine e-procurement platform yakanaka yekugadzirisa kutenga process. WoopShop inoparidzirwa pasi rose kuburikidza nemitambo yedu yepamhenderekedzo yekune dzimwe nyika uye zvikepe kune nyika dzose dzeDahara uye mamiriyoni evatengi vanotida munyika yose, United States, Europe, North America, Middle East, etc. Address: 1910 Thomes Avenue, Cheyenne, WY 82001
Nzira Dzakanakisisa & Kuona Zviri nani pane Zvatakagadzirira
SHOP WITH KUVIMBA
Kwete Spam. Kungobatanidzwa chete, Great Deals, Discounts & More Kuponesa.
* chinoratidza kunodiwa
Chikero chetsamba yemumhepo *
WoopShop: Iyo Yekupedzisira Saiti Yekutenga Pamhepo
Kana iwe uchida kuona zvakanakisa zvekutenga online kune varume, vakadzi nevana, iwe uri munzvimbo chaiyo. WoopShop ndiyo yekupedzisira nzvimbo yekushanya yemafashoni uye mararamiro, kuve wakashanyirwa kune rakawanda zvigadzirwa zvekutengesa zvinosanganisira zvipfeko, shangu, zvishongedzo, zvishongo, zvigadzirwa zvekutarisira uye nezvimwe. Iyi inguva yekutsanangudza zvekare chimiro chako nehupfumi hwedu-mudura rezvinhu zvine chimiro. Yedu yepamhepo chitoro inounza iwe yazvino muzvigadziri zvigadzirwa zvakananga kunze kwefashoni dzimba. Unogona kutenga online paWoopShop kubva pane nyaradzo yeimba yako uye kuti zvido zvako zviendeswe kurudyi kwemusuwo wako.
Yakanakisa Pamhepo yekutenga Saiti nePamusoro E-Commerce App Yefashoni
Iva zvipfeko, shangu kana zvishongedzo, WoopShop inokupa iwe yakakodzera musanganiswa wefashoni uye mashandiro evarume, vakadzi uye vana. Iwe unozoona kuti matenga ndiwo muganho kana zvasvika kune mhando dzezvipfeko iwe zvaunogona kutenga kune dzakasiyana nguva.
Zvipfeko zvevakadzi zvakangwara - PaWoopShop iwe uchawana zviyero zvegumi mune akapfeka zvakatsiga mashati uye bhururu, T-shirts inotonhorera uye jean, kana kurta uye pajama musanganiswa wevarume. Pfeka maitiro ako neT-shirts akadhindwa. Gadzira yekudzokera-kune-kambasi vibe ine varsity T-shirts uye kunetseka jeans. Ingave iri gingham, buffalo kana hwindo-pane chimiro, yakatemwa mashati haina kupingudzwa smart. Vabatanidze pamwe nechinos, cuffed jean kana yakatemwa trousers yeakanaka akangwara kutaridzika. Sarudza yekushongedza yakataridzika ne biker jaketi. Musoro kunze mune makore ane mamiriro akasimba neushingi mune asina kudzivirira majaketi. Bhurawuza kuburikidza neyemukati meshangu chikamu kuti uwane kutsigira zvipfeko izvo zvinoita kuti urambe uine chivimbo mune chero chipfeko.
Trendy zvipfeko zvevakadzi - Online kutenga kwevakadzi paWoopShop chiitiko chinosimudzira. Tarisa muhudyu uye ugare wakasununguka neinos uye rakadhindwa zvikabudura zhizha rino. Tarisa unopisa pazuva rako rakapfeka chipfeko chidiki dema, kana sarudza zvitsvuku zvipfeko zve sassy vibe. Mitsetse mitsetse uye maT-shirts anomiririra mweya yakasarudzika yemafashoni. Sarudza ako anofarira kubva pakati peBardot, kure-pashoni, shati-chimiro, blouson, yakarukwa uye peplum misoro, kuti utaure mashoma. Vabatanidze pamwe neakakora-yakakodzera jeans, masiketi kana palazos. Kurtis ne jean zvinoita iyo yakasarudzika fusion-pfira kusanganisa kweiyo inotonhorera yedhorobha. Eedu makuru esosi uye lehenga-choli kusarudzwa kwakakwana kuita fungidziro pamitambo mikuru yemagariro yakadai semichato. Yedu salwar-kameez seti, kurtas uye Patiala masutu anogadzira sarudzo dzakagadzikana dzekugara akapfeka.
Akashongedzeka tsoka - Iyo nguo painogadzira murume, iyo mhando yehembe dzekupfeka dzaunoratidza hunhu hwako. Tinokuunzira mutsara wakakwana wekusarudza mune shangu dzakasarudzika zvevarume dzakadai sevanopfeka uye vanodzika mafuta. Gadzira chirevo chemasimba kubasa akapfeka brogues uye oxfords. Dzidzira kumarathon yako nekumhanyisa shangu dzevarume nevakadzi. Sarudza shangu dzemitambo yeumwe neumwe yakaita se tennis, nhabvu, basketball uye nezvimwe. Kana kuti pinda mune yakajairika maitiro uye nyaradzo inopihwa neshangu, zvinotsvedza, uye flip-flops. Ongorora mutsara wedu weeshangu mafashoni evakadzi kusanganisira mapombi, chitsitsinho mabhoti, wedge-zvitsitsinho, uye penzura-zvitsitsinho. Kana kunakidzwa kwakanyanya kwekunyaradza uye dhizaini rakashongedzwa uye nesimbi mafati.
Stylish accessories - WoopShop imwe yeakanakisa online online kutenga nzvimbo dze classy accessories izvo zvinonyatsoenderana nezvipfeko zvako. Iwe unogona kusarudza smart analog kana dijitaro emawadhi uye unozvifananidza pamwe nemabhandi uye matai. Tora mabhegi akasarudzika, mabhegi kumashure, uye ma wallet kuti uchengetedze zvakakosha zvako mune dhizaini. Kunyangwe iwe uchifarira zvishongo zvidiki kana zvidiki uye zvinopenya zvimedu, yedu yekushongedza yezvishongo zvepamhepo inokupa iwe sarudzo dzakawanda.
Kunakidzwa uye kupokana - Kutenga online pavana paWoopShop mufaro wakazara. Mambokadzi wako mudiki achada akasiyana-siyana emhando dzakanaka dzejasi rakapfeka, bellina shangu, misoro yemusoro uye zvidimbu. Fadza mwanakomana wako nekutora shangu dzemitambo, T-shirts dzemahara, jerseys dzebhola uye zvimwe zvakawanda kubva kuchitoro chedu online. Tarisa uone yedu mutsara wematoyi iwe waunogona kugadzira ndangariro kukoshesa.
Runako runotanga pano - Iwe unogona zvakare kuzorodza, kugadziridza uye kuratidza ganda rakanaka neecustomer, runako uye kushambidzika zvigadzirwa kubva WoopShop. Sipo yedu, gels dzekugezesa, mafuta ekuchengetedza ganda, mafuta anonamira, uye zvimwe zvigadzirwa zve ayurvedic zvakagadzirwa zvakanyatsogadzirirwa kudzikisa mhedzisiro yekukwegura uye kupa iyo chaiyo yekuchenesa chiitiko. Chengetedza ganda rako rakachena uye nebvudzi rako uber-rakashongedzwa neshampoos uye zvigadzirwa zvekuchengetedza vhudzi. Sarudza zvigadzirwa kuti uwedzere runako rwepanyama.
WoopShop ndeimwe yemhando dzakanakisa dzekutenga online muIndia iyo inogona kubatsira kushandura nzvimbo dzako dzekugara zvizere. Wedzera ruvara uye hunhu kumakamuri ako ekurara nemachira emachira nemachira. Shandisa smart tableware kuti ufadze vashanyi vako. Kurongedza kwemadziro, wachi, mapuranga emifananidzo, uye zvidyarwa zvekugadzira zvine chokwadi chekufema hupenyu mune chero kona yemusha wako.
Mufashoni Mufashoni paYako Fingertips
WoopShop ndeimwe yemasayiti epamhepo anotenga online mune fashoni inowanikwa kune vese. Tarisa vatinosvika vatsva kuti vatarise zvipfeko zvemazuva ano zvekugadzira, shangu, uye zvishandiso mumusika. Iwe unogona kuwana maoko ako pane yakatenderera maitiro pese mumwaka mukupfeka. Iwe unogona zvakare kuwanikwa yeakanakisa emhando yemadzinza panguva dzese dzemitambo yeIndia. Iwe une chokwadi chekufadzwa nezvirimwa zvedu zvemwaka pane shangu, tirauzi, mahembe, hombodo nezvimwe. Iko-kupera-kwemwaka kutengeswa chiitiko chekupedzisira apo fashoni inosvika zvisinganzwisisike mutengo.
Tenga Online paWoopShop uine Kuzere Kuvimba
Chimwe chikonzero nei WoopShop chiri chakanakisa pazvitoro zvese zvepamhepo ndiko kukwana kuri nyore kwarinopa. Iwe unogona kutarisa ako aunofarira mabhendi nemutengo sarudzo yezvakasiyana zvigadzirwa munzvimbo imwechete. Iyo yekushandisa-inoshamwaridzika interface ichakutungamira kuburikidza nesarudzo yako yekuita. Yakakwana saizi machati, ruzivo rwechigadzirwa uye yakakwirira-resolution resolution inokubatsira kuita sarudzo dzakanaka dzekutenga. Iwe zvakare une rusununguko rwekusarudza yako yekubhadhara sarudzo, ingave iri kadhi kana mari-pane-kutumira. Iyo 15-zuva inodzosa mutemo inokupa iwe kuwedzera simba semutengi. Uyezve, iyo yekuedza-uye-kutenga sarudzo yezvisarudzo zvigadzirwa zvinotora vatengi-hushamwari kune inotevera nhanho.
Nakidzwa nekunetseka-musina chiitiko paunotenga mushe kubva kumba kwako kana kwaunoshanda. Iwe unogona zvakare kutengera shamwari dzako, mhuri uye vadiwa uye kuwanikwa kwatinopihwa masevhisi ezvino zviitiko zvakakosha.
Dhawunirodha yedu WoopShop yemahara yekutenga online app izvozvi uye uwane zvirinani E-commerce app inobata uye inopa inopa pane zvipfeko, zvigadzirwa, zvishandiso, matoyi, drones, kuvandudza kwemba, nezvimwe. Android | iOS
Username kana kero ye email *